We Must Win… – PVTV Myanmar
We Must Win…
·9months ago ·28 Comments
ဒီပွဲ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် . . .
Reformists Team Mawlamyine
Like – 4.8K Share – 674
2021-04-24 at 2:32 PM
Phyu Thwe Htun says:
2021-04-24 at 2:37 PM
2021-04-24 at 2:40 PM
ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ။
2021-04-24 at 3:13 PM
2021-04-24 at 3:19 PM
Nay Min Min says:
2021-04-24 at 3:23 PM
2021-04-24 at 3:35 PM
Love is very important on the world. We must win
2021-04-24 at 3:36 PM
Very lovely sound
Miee Miee says:
2021-04-24 at 3:40 PM
Khaing Love says:
2021-04-24 at 3:41 PM
ဒီပွဲ နိုင်ကို နိုင်ရမယ်
Thet Htar Mon says:
2021-04-24 at 4:13 PM
2021-04-24 at 5:00 PM
We must win နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်။
Nway Oo Pannthar says:
2021-04-24 at 5:07 PM
Kyal Ka Lay says:
2021-04-24 at 5:28 PM
2021-04-24 at 5:57 PM
2021-04-24 at 6:01 PM
နိုင်မယ် ဆိုတာ အပြည့် အ၀ယုံကြည် ပါတယ်
T Da T says:
2021-04-24 at 7:33 PM
သီချင်းရေးသူ သီဆိုသူတွေအရမ်းကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးပါ
Kachin Tu Ja says:
Federal army ကိုအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ပါတခြားဘာမှနဲ့အနိုင်ယူလို့မရပါ1988ကိုနမူနာယူပါ
2021-04-25 at 1:19 AM
စိုးသက် ပိုင် ဦး says:
ဖက်ဒရယ်ကိုလက်ခံရန် မလုပ်ဆောင်ပါက မအလ နဲ့ ဆွေးနွေးရန်အကြောင်းမရှိပါ NUG
2021-04-25 at 11:40 PM
Kaung Myat Kao says:
2021-04-27 at 7:00 AM
အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္ ေအာင္ကုိေအာင္ရမည္ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ပက္ပက္စက္စက္ က်ဆုံးေစရမည္ အျမစ္ပါႏႈတ္မည္
Yinyin Chit says:
2021-04-27 at 8:48 AM
2021-04-29 at 3:49 AM